Guddoomiyaha G/Hiiraan oo gaarey Buulo Burde & u jeedka oo la shaaciyey – Radio Baidoa
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Muxumed Caraale & Wafdi uu hogagaminayo ayaa waxaa ay Maanta gaareen degmada Buulo burde ee Gobolkaasi Hiiraan,halkaas oo siweyn loogu soo dhaweeyey.
Wafdiga ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Beledweyne kusoo dhaweeyey Maamulka Magaalada Buulo Burde,Saraakiisha Ciidamada Dowladda & kuwa AMISOM iyo qeybanaha kala duwan ee Bulshada degmadaas.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in ujeedka guddoomiyaha Gobolka Hiiraan uu u tegay degmada Buulo Burde ay tahay sidii uu xilalka ugu kala wareejin ahaa Maamulka degmada oo dhawaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hir-Shabeelle ay isbedel ku sameysay.
Sidoo kale Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Muxumed Caraale ayaa inta uu ku sugan yahay degmada Buulo Burde waxaa uu u kuurgeli doonaa xaaladaha Ammaan iyo mida nololeed ee degmada,isaga oo kulamo la qaadan doona qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ka taagnaa xiisad ka dhalatay Maamul Cusub oo loo Magacaabey degmadaas,kaas oo ay diideen Odayaasha degmada,hayeeshee ugu dambeyn xal laga gaarey.